GOORTA AY BEERTO YAANYADA BISHA MAARSO: MAALINTAAS OO AY KA FIICAN TAHAY IN LA BEERO ABUURKA YAANYO, HADDII TIRADA IYO WAQTIGA SAAMEYN KU YEELATO DALAGGA, IYO WAQTIGA KHUDAARTA LAGU ABUURI KARO URAL IYO SIBERIA - BEER CAGAARAN
Talooyinka bannaanka u ah: goorta ay beero yaanyo bisha Maarso si aad u hesho goosashada wanaagsan?
Tamaandhada waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee khudradda, ku dhawaad ​​beerta oo dhan waxay ku koreysaa beerta. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo yaanyo ah iyo xeerarka beerahooda.
Si aad u hesho goosashada qani ku ah waa mid aad u muhiim ah in la beero geedo waqtigii loogu talagalay, haddii kale dalagga waa la wada lumi karaa.
Goorma ayay ugu fiican tahay in la beero miraha yaryar iyo sida loo doorto maalinta ugu habboon ee tan? Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa si faahfaahsan.
Waa maxay sababta muddadani tahay wakhtiga beeritaanka yaanyada?
Wixii beerta kasta, bilowga guga waa diyaarinta xagaaga. Maarso waa bisha ugu fiican ee lagu beerayo yaanyada iyo miraha kale ee qoysaska habeenkii ah. Waa maxay sababta? Xaqiiqdu waxay tahay in haddii aan tixgelinno wakhtiga abuurka biqilka, iyo sidoo kale muddada horumarinta abuurka, ka dibna bisha Maarso waa bilowga ugu fiicnaanta beerashada geedo. Bishii Febraayo, qadarka iftiinka qorraxdu kuma filna horumarinta geedo., Bishii Maarso, dhererka dayrka wuxuu bilaabmayaa inuu sii kordhiyo si tartiib tartiib ah.
Geedo yaryar waxay u baahan yihiin ugu yaraan 11 saacadood maalintii iftiinka maalintii.
Waa maxay noocyada noocan oo kale ah si ay u beerto?
Waa maxay farqiga u dhexeeya noocyada soo kordhaya ee yaanyada, goorta iyo maalinta maalinba lagu beeray?
Bilowga Maarso, noocyo dheer oo yaanyo ah ayaa lagu beeray geedo, sida:
Alenushka - noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo koray aqalka dhirta lagu koriyo ama beerta furan. Wakhtiga Bisaylkiisa waa qiyaastii 100 maalmood laga bilaabo xilliga soo degitaanka. Miisaanka celceliska miisaanka waa qiyaastii 400 garaam, laakiin xaalado dhif ah miisaanku wuxuu gaari karaa 1 kg.
De Barao - ma aha noocyo caan ah oo caan ah oo tamaandho dheer. Ripens gudahood 130 maalmood laga bilaabo xilliga soo degitaanka. Midhaha kala duwan ee noocan ahi kuma faani karaan miisaankooda, waxay gaadhay celcelis ahaan 100 garaam oo keliya.
Midas - Sida lagu yaqaan sifooyinka, miraha ka mid ah noocyada kala duwan waxay u eg yihiin DeBarao noocyo kala duwan, gaar ahaan marka loo eego qiyaasta. Mid ka mid ah farqiga udhexaadka - midas ayaa si dhakhso ah u dhaqso (ilaa 120 maalmood).
Noocyo kale oo dheer oo yaanyo ah:
Waa maxay lambarka uu ku beeran karo noocyo kala duwan, iyo sidoo kale marka la beero qoyaanka iyo malabka casaan? Noocyo hooseeya oo tayo ah ayaa lagu talinayaa in lagu beeray 15-25 maalmood ee Maarso, kuwaas waxaa ka mid ah:
Alaska - Kala duwanaansho soo kordhaya oo yaanyo ah, oo loogu talagalay dhul furan oo xiran. Qaadida waa qiyaastii 90 maalmood laga bilaabo wakhtiga beerto. Miro wareegsan oo miisaankeedu yahay 80 illaa 100 garaam. Kala duwanaantani waa mid aan qabyo ahayn waxayna ku haboon tahay gobollada qaboobaha qaboobaha.
Malabka pink - A noocyo kala duwan ee yaanyada, aad u caan ah ee bannaanka u. Miro waxay u bislaadaan gudaha 110-115 maalmood, miisaankoodu wuxuu gaaraa ilaa 1 kg.
Grouse - badhtamaha xilliga kala duwan ee kala duwan ee yaanyada, kuwaas oo ku faani wax-soosaarkooda sare. Celceliska waqtiga Bisaylkiisa waa 110 maalmood. Dusha sare ee tamaandhada waxaa lagu daboolaa jilicsan jaale, miisaankoodu waa kala duwan yahay 200 ilaa 300 garaam.
Noocyo kale oo soo koraya oo yaryar oo yaanyo ah:
Daadka dahabka ah;
Goorma ayay ka fiican tahay in la beero noocyo kale oo yaryar oo soo kordhaya oo yaanyo ah? Hore iyo midda dhexe-Bisaylkiisa ee yaanyada for beerto ee lagu koriyo waxaa lagula talinayaa in lagu beeray dhamaadka March, for beeritaanka dhulka u furan - bilowga.
Alpha - heer fasax u bislaaday hore ee yaanyada, ku haboon yahay dhulka u furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo. Muddadii bislaa waa qiyaastii 85 maalmood laga bilaabo biqilka. Midhaha yaryar, celceliska miisaanka 60 garaam.
Valentine - bartamihii bartamihii, kala duwanaansho badan oo yaanyo ah. Celceliska Burburinta waa 95 maalmood. Muuqaal astaamo ah oo yaanyo ah ayaa iska caabin kara qalalan yar. Miisaanka hal miro waa 80-120 grams.
Maxim - fasalka hore ee bislaado ee tamaandhada lagu taliyey in la furo dhulka. Tamaandho ah oo kala duwan ayaa u bislaadaan gudaha 75-80 maalmood. Miisaanka mid ka mid ah yaanyo wuxuu gaaraa celcelis ahaan 100 garaam.
Noocyo kale oo hore u bislaaday ee yaanyada:
Maalmo intee le'eg ayaa ku haboon beeritaanka yaanyada gobollada kala duwan ee dalka? Gobollada intooda badan, beerashada yaanyada geedo waxay dhacdaa bisha Maarso, laga bilaabo gobolka Bartamaha Ruushka iyo soo afjarida Siberia iyo Bariga Fog. Cimilada cimilada, hore u abuuri kartaa abuurka geedo. Taasi waa sababta koonfurta ee dalka waxaad ku beeri kartaa geedo bilowga Maarso ama xitaa bisha Febraayo. Sida iska cad, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya sida loo koro yaanyada gobollada kala duwan.
Gobol kasta, waxaad u baahan tahay inaad dooratid noocyo ku habboon oo awood u leh inay la qabsadaan xaaladaha cimilada ee aagga.
Marka, goorma iyo inta ay dadku beeran karaan yaanyada:
Markaad ku beeri doonto Siberia? Ereyga beeritaanka yaanyada waxay ku xiran tahay oo kaliya gobolka, laakiin sidoo kale kala duwan. Iyadoo ku saleysan tan, maalmaha beerto for miraha yaanyada hore, midka dhexe-hore iyo noocyo goor dambe ayaa laga yaabaa kala duwan:
Noocyada Bisaylkiisa hore ayaa lagu beeray horraantii Maarso, laga bilaabo 7 ilaa 14 Maarso.
Yaanyada xilli-ciyaareedka la beeray bartamaha bisha Maarso, qiyaastii 15 illaa 25 tiradood.
Beerta goos goosta goor dambe waxay dhacdaa dabayaaqadii February iyo horraantii Maarso.
Goorma ayuu ku dhex beeran karaa Ural? In Urals, muddada abuurka yaanyo abuurka for geedo ka duwan tahay taariikhda laga beerto ee Siberia. Yaanyada hore iyo mid dhexe loo yiqiin waxaa lagula talinayaa in lagu beeray bartamihii March, noocyo goor dambe - dhamaadka. Kala duwanaanshaha kaliya ayaa ah in Urarrada loo qaybiyo koonfurta iyo waqooyiga, sidaa daraadeed, gobollada koonfurta ee Ural, kalluunka abuurka ayaa laga yaabaa inuu bilaabo bilowga Febraayo.
Shuruudaha beeritaanka yaanyada ee gobolka Central Black Earth.
Muddada abuurista miraha geedo ee yaanyada hore waxay ka bilaabantaa Febraayo 25 ilaa Maarso 5.
Muddada abuurista miraha geedo yaanyo dhexdhexaad ah waa laga bilaabo Maarso 1 ilaa Maarso 10.
Goormaad ubaahan tahay in aad beerto yaanyada Bariga Bariga ah iyo maalintee ugu fiican ee beereed?
Noocyada ugu horreeya ee yaanyada la beeray laga bilaabo Maarso 1 ilaa March 25.
Noocyada dhexe iyo kuwa dambe ee yaanyada lagu beeray geedo laga bilaabo Maarso 20 ilaa Maarso 30.
Marka aysan macquul ahayn in lagu abuuro abuurka?
Bannaanka u khibrad leh waxay isticmaalaan jadwalka Dayaxa, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in goobta dayaxa ay saameyn ku yeelan karto koritaanka dhirta. Taas waxaa saldhig u ah, yaanyada lagu beeray karaa maalin kasta bisha Maarso, oo ku xiran tahay bilaha sii kordhaya. Isku-dubbarididda qorshaha lagu beerayo wejiyada dayaxa, sidoo kale laguma talinayo in lagu beero geedo maalinta dayaxa buuxda iyo labadii maalmood ee ugu dhawaa.
Ha yareeynin muhiimadda ay leedahay tamaandhada xilligaa. Kala duwan kasta iyo gobol gaar ah, waxaa jira dhowr shuruuc oo kala duwan oo ku saabsan xilliga beerto, laakiin intooda badani bannaanka iyo bannaanka ayaa rumaysan in bisha Maarso ay tahay bisha ugu guulaha badan ee beeritaanka yaanyada.